W-Caafimaadka iyo Xeer ilaaliyaha Qaranka oo Booqday Dhaawacyada Qaraxii Jaziira – fogaanarag
Wasiirka caafimaadka iyo xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa booqday dadkii ku dhawacmay qaraxii kooxdda argaxisadda UGUS ay ka gaysteen Hoteelka Aljazeera oo la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka caafimaadka Xawo Xasan Max’ed iyo xeer ilaaliyaha guud ee Qaanka Dr. Axmed Cali Daahir oo mid mid usoo booqday dhaawacyada isbitaalkaasi lagu daweeynayo ayaa warbixin ku saabsan xaaladda dhaawacyada ka dhageystay agaasimaha isbitaalka madiina oo sheegay in 25 ruux oo dhawac ah la keenay isbitaalka, isagoo xusay in afar ka mid ah uu fududaada dhawacoodda midna uu geeriyooday ,sidoo kalana isbitaalka la soo gaarsiiy maydadka Sideed qofood oo ku geeriyootay qaraxii hotelka Jaziira.
Sidoo kale wasiirka caafimaadka iyo xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa booqday hoteelka Aljazeera ee Qaraxaha lala beegsaday iyagoo soo eegay burburka uu geystay qaraxaasi.
Xeer ilaalihay guud ee qaranka Dr Axmed Cali Daahir oo ku hadlay hotelka Aljazeera ayaa ka tacsiyey dadkii ku geeriyooday isagoo xusay in dadka ku dhaawacmay ay dowladdu wax u qabaneyso.
“aad iyo aad ayey u fiicnayeen dadkii aan booqanay haddii ay jiraan dad ay cuslaato xaladoodda dowladda ay caawinayso dowladda, waxaan u rajaynayaa dadkii ku geeriyooday in Alle u naxariisto kuwa dhawacana ay bogsadaan gacan ka xaqdaran ayaa dishay,waxaa ay tani natusanaysaa cadawadda qotada dheer oo ay dadka Soomaaliyeed u qabaan dhagar qabayaasha” ayuu yiri eel ilaliyaha.
Wasiirka Caafimaadka ayaa hoosta ka xariiqday in wasaaraddu ay wax u aban doono dadka ku dhaawacmay qaraxaasi, iyadoo fal argagixiso ku tilmaantay qaraxii Hotelka Jasiira, waxeyna ugu baaqday ummadda Soomaaliyeed ineey meel uga soo wadajeestaan la dagaallanka kooxda UGUS.